सिड्नी सपना : हेर्दा बुढो भए पनि मज्जाले सन्तुष्टि दिन्छ ! » Nepal Fusion	Nepal Fusion	सिड्नी सपना : हेर्दा बुढो भए पनि मज्जाले सन्तुष्टि दिन्छ ! » Nepal Fusion
सिड्नी सपना : हेर्दा बुढो भए पनि मज्जाले सन्तुष्टि दिन्छ !
मसँग बिहे गर्छ्यौ – आदिले पनि सृष्टिको कानमै बिस्तारै भन्यो ।
अँगालो पारेर आदिको घाँटीमा बाँधेको हात निकाल्दै सृष्टिले भनी- यति चाँडै !
सुनिताले भनी- सिड्नीमा पीआर नहुन्जेल सारै गाह्रो हुँदोरहेछ । हाम्रो हेर त कस्तो छ रु बुढाबुढी मरीमरी काम गर्‍यो, सबै पैसा कलेजको फी तिर्दै सकिन्छ । उमेर ढल्किन लागिसक्यो । बच्चा पाउनेसमेत फुर्सद छैन । यतिका महिनासम्म रिलेसनसिपमा बसेर उसलाई चिनेपछि, उसको माया लाग्छ भने उमेरले के गर्छ त ! बिहे गर, ढुक्क हुन्छ । एक वर्षमा पीआर आइहाल्छ अनि पढ्नू । यो कलेजको फी तिर्ने चक्करबाट त छुटकारा पाउँछेस् ।सल्लाह गर्न सृष्टिको साथीबाहेक आफन्तहरू सिड्नीमा कोही थिएन । अतः उसले हार्बरब्रिज पारि बस्ने साथी सुनितालाई फोन गरी ।
निकितालाई पनि सृष्टिले फोन गरी- आदि बिहे गरौँ भन्छ । के गरौँ रु निकिताले तीन पल्ट सोधी- तँलाई उसको माया लाग्छ रु सृष्टिले जवाफ दिन सकिन ।
सँगै सुत्दा कस्तो लाग्छ !
खोइ १ हेर्दा बुढो भए पनि बेडमा त फायर छ । मज्जाले सन्तुष्टि दिन्छ । तर, बिहे नै गर्न चाहिँ के गरूँ, कसो गरूँ भा’की छु । बुवा, मम्मीलाई कसरी भन्ने भइरा’छ । कोर्ट म्यारिज गरेर फस्छु कि जस्तो लाग्छ ।
सृष्टिले शरीरको भोक मेटाउँदै थिई कि माया साट्दै थिई, छुट्टयाउन सकिरहेकी थिइन । माया कस्तो हुन्छ रु यही त थियो गाह्रो प्रश्न ।
माया गर्छु भन्नेहरूको मायाले सधैँ उसलाई रुवाएको थियो । के रुवाउने नै हुन्छ त माया ! सुरुमा निक्कै चेपारो घस्ने, अनि पछि वास्ता नगर्ने चिसो बैगुनी चिज नै हो त माया रु मान्छेहरूले साँचो मायाको कुरा गर्छन् । कस्तो हुन्छ साँचो माया !